जापानमा नेपाली भाषामै कोभिड –१९ बारे जानकारी लिन सकिने – PrawasKhabar
जापानमा नेपाली भाषामै कोभिड –१९ बारे जानकारी लिन सकिने
२०७७ चैत १७ गते १३:०६
टोकियो । जापान सरकारले कोभिड –१९ बारे विभिन्न भाषामा जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जापानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जापान बस्दै आएका विदेशीलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो वेबसाइट मार्फत १२ ओटा भाषामा अनुवाद गरिएको फारम र जानकारी सार्वजनिक गरेको हो ।
यो व्यवस्थाले जापानी भाषामा दखल नभएका विदेशीलाई फारम र जानकारी पत्रमा भएको कुरा बुझ्न सहयोग गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त जानकारी पत्रमा खोप कसले लगाउन सक्छन् ? खोपको सम्भावित असर केके हुन् ? खोप कसरी लगाउन सकिन्छ ? लगायतका जानकारीहरु समेटिएको छ । यसैगरी खोप लगाउनु अघि याद गर्नु पर्ने जानकारीहरु खोप फारममा समावेस गरिएको छ ।
मन्त्रालयले अंग्रेजी, अरबी, फ्रान्सेली, इन्डोनेशियाली, कोरियाली, बर्मिज, नेपाली, पोर्चुगाली, रुसी, स्पेनी, तागालोग र थाई भाषामा अनुवादित जानकारी पत्र र फारम सार्वजनिक गरेको छ ।
विभिन्न भाषामा अनुवादित यी सामाग्रीहरु दर्ता आवासमा पठाइनेछ । खोप लगाउने पालो आएपछि अनलाइन वा फोन मार्फत नगरपालिकाले तोकेको क्लिनिक अथवा खोप स्थलमा आफ्नो नाम दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।
खोपका लागि दिइएको आवेदनमा आवेदकले आफ्नो मेडिकल इतिहास र स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी सहित पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । जापानी भाषा नबुझ्नेमा आफ्नो भाषामा अनुवादित भाषाको फारम हेर्दै सोही अनुरुप जापानी भाषाको फारम भरी खोप स्थलमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
फारम चेकजाँच गर्ने डाक्टर तथा नर्सले अन्य भाषा नबुझ्ने भएकोले जापानी भाषामा नै फारम भर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । खोप लगाउनका लागि विदेशी नागरिकले पनि जापानी नागरिक सरहकै सर्तहरु पूरा गर्नुपर्नेछ ।
साथैे खेमर, मंगोलियाली, भियतनाम र चिनियाँ भाषामा पनि फारम र जानकारी अनुवाद भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
एनआरएनएको कार्यकाल ६ महिना थप
टोकियोमा ६६ नयाँ कोरोना भाइरस संक्रमित फेला
तालिबानले अपमान गरेको भन्दै पाकिस्तानद्वारा अफगानिस्तानसँगको हवाई सेवा बन्द
अफगानिस्तानको एउटा शिया मस्जिदमा बम बिस्फोट, ३० जनाको मृत्यु
दक्षिणी ताइवानको एक भवनमा आगलागी, कम्तीमा ४६ जनाको मृत्यु